N'ogbe Ji achọ chakra esi ísì ụtọ soy kandụl na kristal na ngwaahịa ụlọ ọrụ na-emepụta | Mmeri
Ji achọ chakra esi ísì ụtọ soy kandụl na kristal na ngwaahịa
High-Quality Natural Soy Crystal Candle nwere 200 grams nke 100% elu mma eke soy wax, na-agwọ kristal chakra nkume, ezigbo mmanụ dị mkpa, akwukwo sage, 100% owu kandụl wick, na-ere ọkụ ruo 40hours. Ọ nwere ike inye ọnọdụ izu ike na nkasi obi.
Crystal kandụl na-enye nnukwu ọcha na nchekasị, mee ka ị dị jụụ.
Anyị nwere ite iko kandụl a na ngwaahịa, ọ bụrụ na ịchọrọ kandụl a, anyị nwere ike ibuga ya ngwa ngwa, yabụ ịnwere ike ịnata ngwongwo gị na obere oge.
Size: D8.6cm * H10.3cm
Crystal marble Soy Wax Aromatherapy esi ísì ụtọ Candles na pụrụ iche uzo iko akpa
Ọ bụghị naanị na ọ zuru oke maka ihicha ụlọ gị na inye ikuku ọhụrụ, kamakwa maka onyinye agbamakwụkwọ, oriri, nri abalị na onyinye ekeresimesi, ihe ịchọ mma ekeresimesi. Dịkwa mma maka yoga na aromatherapy.
Mara: Ahapụkwala kandụl na-ere ọkụ n’enweghị nsogbu. Debe ya ebe aka ụmụaka na anu ulo ghara iru gi. Agbala kandụl na ihe ọ bụla nwere ike ịmị ọkụ. Enwere ike itinye ya naanị na ikpo ọkụ na-eguzogide ọkụ, na-eguzogide ọkụ. Zere iji ihe oyi dị ka iko ma ọ bụ marble.
Esi ísì na mbukota niile nwere ike ahaziri !!!
Enwere ike ịnye ọrụ nlele.
Soy Wax + Frosted candle ite + Cotton wick + mkpuchi achara
Omenala dị ka ndị ahịa chọrọ
Site na CPL & Symrise. Enwere ike ịhọrọ 2%, 3%, 5%, 10%
Mma ụlọ, yoga, ememme, nkwari akụ, agbamakwụkwọ, oriri, spa na ịhịa aka n'ahụ.
Ntinye ngwa ngwa / Omenala / ODM OEM / sample
3000pcs. Enwere ike ịnabata obere iwu ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa.
Nke gara aga: Candles na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na-acha uhie uhie na soy wax
Osote: Delọ Mma Eke Na-esi ísì ụtọ Soy Wax Cube Melts tarts
Esi ísì ụtọ ite
Kandụl ndị na-esi ísì ụtọ dị n'akụkụ m
Candles na-esi ísì ụtọ n'ịntanetị
Organic hemp wicks ntekwasa na beeswax
Onwe logo nkeonwe eji achọ kandụl mma
nwa efu iko kandụl akpa
paraffin wax aromatherapy mini kandụl
Ceramics ite eji achọ kandụl